Aniga oo ah Aqoonyahan / Abwaan Ibraahim-Rashiid Cismaan Guure waxaan kula talin lahaa ummadda reeer somaliland Qodobbadan: | Togdheer News Network
1. In sharciga Doorashada Goleyaasha Baarlammaanka loo sameeyyo mid keliya, Laakiinse lagu qeexayyo mid kasta meeelaha ay ku kala duwan yohiin. Si loo soo koobo waqtigii lagu lumin lahaa dood badan . Waayyo tiradu waa isku mid labada gole haddii la kordhiyyo & haddii sidooda loo deynayyoba.
2. Madaxweynaha waa in la siiyyaa Awood Distoorka ku qoran in uu kala diri karo Golayaasha Baarlammaanka & Guddida Doorashooyinka Qaranka marka ay mudda xilood koodu dhammaato si aanay isaga sii fadhdhiyin.
3. Waa in wasiirka Arrimaha Gudaha la siiyyo awood uu ku kala diri karo Guddiyyada Goleyaashsha Deegaanka oo ku qeexan Distoorka dalka marka uu muddo xilood koodu dhammaado si loo soo doorto beddel kooda.
4. In si deg deg ah looga wada hadlo cabashooyinka ka imanayya Beelaha darafyada ee ku saabsan SAAMI-QAYBSIGA.si xal waara looga gaadho.
5. Si dalka looga ilaaliyyo in aynnu abuurno keligii taliyye isagu wax kasta soo magacaaba waa in aanu madaxweynuhu soo magacaabin Guddida Doorashooyinka, Taliyeyaasha Ciidammada Qaranka waana in ay si siman u soo magacaabaan Goleyaashsha Deegaanka ee 6da Gobol ee dalku ka kooban yahay. Magaala madaxdu waa in ay Guddida Doorashada Qaranka Qof hal dheeri ah ku yeelataa.
Waana in sharci lagu qeexaa shuruudaha ashkhaastaas looga baahan yahay. Sida Da’dooda, heerka Tacliintooda, in aanay denbiileyaaal ahayn & tirada Dumar ahaan Gobol kasta looga baahan yahay in ay kaga jiraan.
6. In xubnaha Guddiyada heer qaran ee Dhallinyarada, Haweenka, Garyaqaannada, Caddaaladda, war faafinta, Caafimaadka, Qandaraasyada, waxbarashada & Kuwa kaleba laga soo magacaabo 6da Gobol ee uu dalku ka kooban yahay iyada oo xubin hal dheeri ah la siinayyo Caasimadda dalka. Marka ay muddo xilood koodu dhammaadona waxa kala diri kara wasiirrada ay Guddiyadaasi hooos yimaaddaan si loo soo doorto kuwii beddeli lahaa.
7. Waa in aanay shaqaalaha Dowladda Qori karin eryina karin wasiirrada & Madaxda kale ee wasaaraduhu waxana Qori kara shaqaalaha Guddi ka socota wasaaradda shaqada & shaqaalaha. Waxana eryi kara oo keliya Guddida Asluuubta & Anshax marinta wasaaradda oo qofkaasi shaqada ka hayyo oo ay la socdaan Guddida Asluuubta & Anshax marinta Heer Qaran ee wasaaradda shaqada & shaqaaluhu.
8. Waa in la sameeyyaa HAY’ADDA CABATINKA QARANKA. Oo uu muwaaddin kastaa cabatin kiisa u soo gudbin karo waana in ay xafiisyo ku yeelataa dhammaan Gobollada, Degmooyinka & magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan.
9. In dadka dilalka geystay ee ay dadkii ay dadkooda laayyeen yidhaahdeen ha naloo dilo si deg deg ah loo qisaaso. Oo aan lagu hayn xabsitada dowladda iyada oo lagu raalli gelinayyo ha’ado lagaga qaadanayyo Gunno yar.
10. Madaxweynuhu wax saxeexa waa in aanu ku yeelan dadka marka la qisaasayyo ee waa in sharciga Xaakinnadu ay ku qaadeen lagu fuliyyaa sida ay Diiinta Islaamku dhigayso.
Waana in aanu madaxweynuhu saamixi karin qof denbiile ah oo lagu soo xukumay maxkamadaha dalka.
Waxa keliya ee wax ka beddeli kara xaaladda maxbuuskaasi waa iyada oo ay warbixin hor lihi ku soo korodhdho kiiskiisii oo ay dib u eegtay maxkamaddu oo ay go’aan cusub ka gaadhdho.
11. In xubin kasta oo Baarlammaannada ka tirsani ay xafiis ka furato Gooobtii, Degmadii ama Gobolkii laha soo doortay. Si uu ula socdo waxyaalaha ka dhacayya ama tabashada & Xaaaladda nololeed ee dadkii soo doortay oo aanay iska dhex barraaqsan Caasimadda.
12. Agaasimeyaasha hoose ee Lacagtu waxay mas’uul ka yihiin wax kasta oo ku saabsan maaliyadda uu faraha ku hayyo. Shillin kasta oo ka baxayya khasnadda dowladduna waa in uu ku baxaa habka Qaan-sheegashada iyada oo ay la socdaan waraaqaha caddaynayya qofkaasi ama shirkaadaasi waxa ay u qabatay waaxdaas dowladda iyyo oggolaanshaha madaxa wasaaraddaas ama wakaaladda.
Lacag bixinta waa in ay saxeexaan ugu yaraan 2-3 qof oo kala duwani. Waana in koobbi la siiyyaa xafiiska xisaabi xil ma leh & wasaaradda maaliyadda. Si loo hubiyyo in ay lacagtaasi si xalaal u baxday.
13. In lacagta soo gasha wasaaradda ama wakaalad kastaa ay ku jirto Barnaamij kombiyyuutar oo loogu tala galay in xogtaas lagu ururiyyo & weliba habkii kaydka lacagta ee lagu qori jiray Buugagga wasaaradda ama wakaaladdaas si haddii uu khalkhal ku dhaco xogta kombiyuutarka ku kkaydsani aanay u lumin xogtaa rasmiga ahi marna.